Ku noolaanshaha "qawaaniinta cusub". Badalida Habdhaqanka Macaamiisha ee Boqortooyada Midowday - Nidaamka Baradhada
Newsото Potato News Maanta
Beeraleyda iyo kuwa cuntada keena ayaa loo isticmaalaa in wax looga qabto isbeddelada dalabka macaamiisha. Si kastaba ha noqotee, way adag tahay in la xusuusto waqti ay muuqaalka macaamiilku isu beddelay sidii si weyn sida saddexdii bilood ee la soo dhaafay ee karantiil.
Golaha Horumarinta Beeraha iyo Beeraha ee Boqortooyada Midowday (AHDB) wuxuu si dhaw ula socday isbedeladan wuxuuna iftiimiyay cabirrada muhiimka ah ee saameeya baahida.
Maqaalkan ayaa lagu dhajiyay bogga Wararka Maanta baradhada, David Swales, Madaxa Falanqaynta Istaraatiijiyadeed ee AHDB, wuxuu soo koobayaa qaar ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee qaabeeya baahida macaamilka isla markaana saameyn ku leh rajooyinka beeraha ee sanadkan. Swales waxay qortay: “Ilaa dhowaan, dhibaatada ugu weyn ee macaamiisha ee beeraha waxay ahayd sumcadda beeraha, gaar ahaan hilibka iyo soosaarka caanaha. Cuntada geedaha ayaa ahayd fikrad la moodo, horumarin waarta iyo ilaalinta deegaanka ayaa ahayd aaggaga ugu muhiimsan. Dhibaatooyinkaasna ma dhammaanin, laakiin maanta dareenka dadku wuxuu u weecday welwel dhaqaale iyo mid muddada fog ah.
Ilaa intee ayuu si qoto dheer u socdaa isbeddelladan qaab dhismeedka macaamiisha? Sidee ayay arrimuhu isu beddeli doonaan markay dadku ku noqdaan qaab nololeedkoodii caadiga ahaa?
Muuqaal dhaqaale oo calool xumo
Saadaasha dhaqaale ee ku saabsan saamaynta Covid-19 way kala duwan tahay, laakiin cilmi baadheyaasha dhammaantood waxay isku raaceen inaan qarka u saaran nahay hoos u dhicii ugu weynaa ilaa 1940-yadii. Tallaabooyin ay ka mid yihiin qorshaha mushaharka ee dowladda ee loogu talagay shaqaalaha ku jira fasaxa aan la bixin, oo ay ka faa'ideysteen 7,5 milyan oo qof, ayaa ilaaliyay inbadan. Laakiin ficilkoodu wuxuu dhamaan doonaa bisha Oktoobar, shaqo la'aantu way sii kordhayaan, dakhliguna hoos ayuu u dhici doonaa.
Tani waxay muhiim u tahay beeralleyda, soosaarayaasha iyo baarayaasha, maadaama marka lacag dhimista la dejiyo, macaamiisha ayaa heli doona lacag yar oo ay ku isticmaalaan. Marka la eego qiyaasta baaxadda ee hoos u dhaca, waxaan filayaa in tani ay tahay qodobka ugu muhiimsan dhaqanka macmiilka, oo saameyn ku leh doorashada nooca cuntada iyo meesha wax lagu gato.
Muhiimad weyn ma ahan oo kaliya “qotodheer” ee hoos udhaca, laakiin sidoo kale xadka ka bixitaankeeda. Xaqiiqdii, hoos u dhicii 2008 waxaa lagu gartay soo kabasho aad u gaabis ah, iyo sawir la mid ah ayaa culeys culus saaray macaamiisha muddo dheer.
Dukaan macno leh
Waxaan ka ogaanay khibraddii hore in macaamiisha ay beddelaan dhaqankooda markay miisaaniyaddoodu adagtahay ama kalsoonida ay ku qabaan mustaqbal aamin ah aysan aad u sarreeyn. Iyada oo ku saleysan xogta ka timid raadiyahayaga macaamiisha IGD iyo AHDB, waxaan kala saari karnaa laba nooc oo dabeecad ah oo aan horay u soo aragnay - badanaa waa had iyo jeer inaad adigu cunto kariso (adigoon isticmaalin cunnooyinka habboon) iyo in ka yar inta badan lagu cuno bannaanka guriga. Waxaan si faahfaahsan uga hadli doonaa goor dambe.
Laakiin si la yaab leh, imisa macaamiil ayaa beddelaya caadooyinkooda wax iibsashada inta lagu jiro hoos u dhaca dhaqaale. Siyaabaha ay macaamiisha u isticmaalaan lacagtooda waa calaamad aad u sareysa: dadku si yar uma fiirsadaan magacyada, iibsadaan alaabada lagama maarmaanka u ah ama waxay ku iibsadaan inta badan badeecadaha suuqyada waaweyn qiimo dhimis. Dabcan, tan iyo hoos u dhicii ugu dambeeyay, waxaan aragnay koboc joogto ah oo ku saabsan dhismooyinka adag. Iyada oo la raacayo isbeddelkan, dhammaan dukaannada tafaariiqda ayaa iyaguna hoos u dhigay qiimaha iyagoo isku dayaya in ay macaamiisha ka horjoogsadaan.
Karantiil ayaa horay u saameysay iibsadayaasha. Raad-raaca macmiilka AHDB (AHDB / YouGov) laga soo bilaabo Abriil wuxuu muujinayaa aragti ka duwan tan miisaaniyadda, iyada oo seddex meelood meel ka mid ah macaamiisha ay sheegeen in ay horay u habeeyeen miisaaniyaddooda cuntada, marka saddexaadna waxay yiraahdaan ma diiwaan-gelinayaan isbeddelada.
Illaa iyo imminka, saamaynta dhaqaale ayaa umuuqatay mid aan macquul ahayn: macaamiisha qaar ayaa shaqo la'aa ama ladiiday, halka kuwa kale si buuxda loogu siiyay qiimo hoose. Bilaha soo socda, waxaan rajaynayaa in kooxda sida xun u saamaysay ay kordhin doonaan baaxad ahaan, maaddaama dhammaan cawaaqibka hoos-u-dhaca ay dadka badankood dareemi doonaan.
Kalsoonida macmiilku u leeyahay kaabayaasha aasaasiga waxay ku xirnaan doontaa labadaba cabbiraadaha masaafada bulshada iyo adkeynta miisaaniyadaha qoyska. Waxaa yaraanaya macaamiisha doonaya inay wax cunaan oo ka baxsan guriga, iyo in ka yar oo awoodi kara. Sidaas darteed, macaamiishaas ku cunay makhaayadaha dhaadheer ee sare waxay u wareegi karaan iibsashada alaabada heerka sare ah ee suuqyada waaweyn ama waxay siin karaan ahmiyadaha raashinka laga qaado.
Tilmaamaha dowladda ee guriga ayaa waxay ka faa'iideysteen bakhaarrada internetka (laga bilaabo 7,4% wadarta dukaamada raashinka ilaa 10,2% bishii Abriil, Kantar Worldpanel) iyo dukaamada yar yar ee habboon. Iibiyayaasha Hilibka ayaa sidoo kale arkay kororka iibka, qeybtooda suuqa ayaa korodhay 4,2% ilaa 5% wadarta hilibka, kalluunka iyo digaagga (xogta laga soo bilaabo Maajo 17, 2020).
Iyada oo ku saleysan xaqiiqdan, cilmi-baarayaashu qaar waxay soo jeediyeen in ay jirto xiise kordhaya oo ku saabsan alaabada maxalliga ah ee dalka. Si kastaba ha noqotee, sahamada macaamiisha ma xaqiijin tan, waxaanan u maleynayaa inay aad ugu dhowdahay fududeynta iyo helitaanku inay yihiin wadeyaasha dhabta ah ee kororkan. Arimaha sida weyn loo iftiimiyey ee ku saabsan helitaanka alaabada bakhaarada waa weyn ee maqaayada gooni u goosadka ayaa laga yaabaa inay ka joojiso dukaameeysatada suuqyada waa weeyn.
Dukaamada yaryar (oo ay ku jiraan beeralayda) ayaa ka faa'iidaystay xaaladda. Dhibaatada ayaa ah inay sii wadi doonaan faa'iidadan mustaqbalka.
Laakiin rabitaanka ah in lagu iibsado cuntada iyo cabbitaannada internetka ayaa mar hore loo aqoonsan karaa mid waara, iyo coronavirus kaliya ayaa dardar gelisay kororka waaxdan.
Caado dhaqameedka cusub
Maaddaama dad badani waqti badan ku qaataan guriga, waxaan aragnaa koror aad u weyn oo ku saabsan xiisaha cunno karinta guriga. Waxaan aragnaa koror ku yimid tirada macaamiisha rumeysan in hilibka lo'da, idaha iyo hilibka doofaarka ay ku habboon yihiin cunidda usbuuca bartamihiisa, taasoo laga yaabo inay u sabab tahay xaqiiqda ah inay heystaan ​​waqti dheeri ah oo ay ku karsadaan ama ku karsadaan noocyo badan oo ah suxuunta.
Sida lagu xusay daraasadda AHDB, ku dhawaad ​​rubuc ka mid ah macaamiisha ayaa sheegaya inay hadda wax karsadaan hadda wixii ka horreeyay. 18ka bilood ee soo socda, waxaan filayaa in isbeddelkani uu sii socon doono.
Xayiraadaha karantiil ayaa si tartiib tartiib ah kor loogu qaadayaa, laakiin shirkado badan ayaa ku dhiirrigeliya shaqaalahooda inay ka shaqeeyaan guriga. Markaa, tiro aad u badan oo dadku waxay sii wadi doonaan howlahooda ka fog xafiiska.
Sida lagu xoojiyay qaybta Dukaan-garashada, Miisaaniyadda ayaa inta badan keenta qiime sare oo soo saarka alaabada lagu kariyo guryaha, waxaanan filan karnaa in duruufaha dhaqaale ee adagi ay xoojin doonaan isbeddelkan, kaas oo si togan saamayn ugu yeelan doona horumarinta waaxda xoolaha.
Kobaca hilibka iyo waxyaabaha caanaha laga sameeyo
Bilihii la soo dhaafay, isbeddelada wax lagu karsado ee guriga ayaa keenay koror isticmaalka cunnada hilibka iyo waxyaabaha caanaha laga sameeyo. Iibinta alaabada sida hilibka lo'da, digaagga digaagga, jiiska iyo kareemada ayaa si aad ah kor ugu kacay.
Intaa waxaa sii dheer, tirada dadka sheeganaya inay yareeyaan cunista hilibka iyo waxyaabaha caanaha laga soo bilaabo tan iyo markii karantiilku si weyn hoos ugu dhacay. Xaqiiqdii, tirada dadka sheeganaya inay cunaan hilib badan ayaa labanlaabmay - min 7 ilaa 14% (AHDB / YouGov, Abriil 2020), halka tirada dadka yareeynaya cunidooda ay hoos uga dhacday 27% ilaa 16%. Marka laga hadlayo waxyaabaha caanaha laga sameeyay, waxaa sidoo kale jiray hoos u dhac ku yimid tirada kuwa hoos u dhigay isticmaalkooda (17% ilaa 11%), tirada dadka caanaha jecelna waxay kordheen 5 ilaa 12%.
Xilliga lacag dhimista, marka fursadaha macmiilku hooseeyaan, qiimahu wuxuu noqonayaa qiyaasaha ugu muhiimsan marka la dooranayo alaabada. Caadi ahaan, muddadan, waxaa hoos u dhacay mugga iibka badeecooyinka loo cuno cunno caafimaad leh.
Bilaha soo socda, marka aan ka soo baxno go'itaanka oo aan bilowno "nidaam cusub", waxaan filan karnaa in dib loo qiimeeyo qiimayaasha macaamilka. Waxaan u malaynayaa in baahida macaamiisha ay qaabayn doonto arrimo, kuwaas oo looga wada hadli doono xagga hoose.
Ha ka fileynin deg-deg deg deg ah suuqa makhaayadaha. Baahida loo qabo in la ilaaliyo fogaanta bulshada iyo shuruudaha kale kama qeybqaadaneyso kobcinta faa'iidooyinka kafateeriyada iyo makhaayadaha. Saameynta masiibada ku dhacday warshadaha waxaa la dareemi doonaa bilaha iyo sanadaha soo socda. Macaamiil badan ma jeclaan doonaan inay wax cunaan sidii marar badan oo kale, halka qaar kalena aysan awoodi doonin inay cunaan.
Iibsadayaashu waxay noqon doonaan kuwa dhaqaala badan, tirada wax iibsashada ayaa la dhimi doonaa. Waxyaabaha ay ka midka yihiin sida saaxiibtinimada deegaanka ee badeecada iyo saamaynta ay ku leedahay caafimaadka ayaa ahmiyad weyn u yeelan doonta dhammaan macaamiisha, laakiin sida aan ka ognahay qibradihii ka soo baxay hoos udhacii hore, mar dambe ma noqon doonaan darawallada iibsiyada badankood.
Waxaan arki doonnaa dib u soo nooleynta cunno karinta guriga iyadoo ay ugu wacan tahay arrimo dhaqaale iyo koror ku dhaca waqtiga ay dadku ku qaadan doonaan guriga.
Koboca cunno bixinta iyo iibinta qeybaha iibka ayaa sidoo kale la rajeynayaa awoodiisa iyo nabadgelyo la dareemayo.
Arrimahani waxay saameyn ku yeelan doonaan horumarka suuqa beeraha. AHDB waxay sii wadi doontaa la socodka dhaqanka macaamiisha si ay ula socodsiiso soosaarayaasha beeraha. Macluumaad dheeraad ah waxaa laga heli karaa bogagga shabakadda. Tafaariiqda iyo Macmiilka.
Tags: coronavirusku dhaca baahida macaamiishasaadaalinta dhaqaalaha